Uyenza njani eyona ngxelo intsha yenguquko yeAdWords | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2015 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 UAmanda West-Bookwalter
Uncedo lweNtengiso zikaGoogle
Yintoni onokuyikhetha: Intengiso yedijithali eheha umdla etsala utyelelo lwewebhusayithi eli-1,000 12? Okanye lowo uqhuba kancinci ofumana nje ukucofa u-XNUMX ukuza kuthi ga ngoku?
Umbuzo okhohlisayo. Impendulo ayikho.
Ubuncinci, de ube uyazi ukuba zingaphi kwezo ndwendwe ziguqulweyo
Intengiso ekujolise kuyo kakhulu ekhokelela kwishumi lezenzo eziguqukayo ezinokuphindaphindeka zinokuxabiseka ngokuphindwe kalishumi kunaleyo itsala amakhulu eendwendwe ezingafanelekanga ezingaguqukiyo. Kwilizwe apho yonke into icofa imali, ukuguqulwa kubalulekile. Emva kwayo yonke loo nto, yeyiphi inqaku lokuhlawula intengiso ukuba ayizukuphumela kwizithuthi ezifanelekileyo ezinokuthi zenze ingeniso ethile njengembuyekezo?
Esi sisizathu emva kotshintsho kuGoogle kutshanje kwi-AdWords yokutsala kunye nokuwisa ingxelo yomhleli. Entsha Iikholamu zokulandela umkhondo woguqulo ukunika abathengisi ulawulo ngakumbi ngendlela idatha eboniswa ngayo ukuze ubone ukuba yintoni esebenzayo ngokwenene.
Yintoni etshintsha ngeNgxelo yokuGuqulwa kweAdWords?
Entsha Ukuguqulwa ikholam ithatha indawo Ukuguqulwa kokusebenza. Le kholamu intsha ibonisa idatha yazo zonke iintshukumo zokuguqula kunye nokuseta kokucwangcisela ukuseta ku "on."
Okwangoku, i Zonke iinguqulelo ikholam ithatha indawo Uqikelelo lotshintsho olupheleleyo. Le kholamu ibonisa idatha ye zonke uguquko-nokuba ujikile ulwenziwo on or off.
Zithetha ntoni utshintsho kwiNgxelo yokuGuqulwa kweAdWords kuwe?
Ukuba ubona ujingi olukhulu kuguquko lweAdWords, ungoyiki. Ngokuqinisekileyo ufuna nje ukwenza uhlengahlengiso oluthile ukuze iingxelo zakho zihambelane nengcaciso eguqukayo kaGoogle guquka. Oku kuyakwenza ukuba kube lula ukugxila kuguquko olukhulu olwenzela ishishini lakho imali.
Utshintsho lwengxelo yokuguqulwa luya kwenzeka ngokuzenzekelayo, kodwa kukho amanyathelo ambalwa omele uwathathe ukuqinisekisa ukuba idatha yakho ihanjiswa ngendlela egudileyo nengagungqiyo:
Lungisa useto lwakho lotshintsho olukhulu noluncinci
Ukuba awukabikho, misela ngokuthe ngqo ukuba yintoni ekubaliweyo njenge macro uguquko kwishishini lakho. Oku kunefuthe ngqo kwingeniso yenkampani yakho kwaye kubandakanya ukuthenga okwenyani okanye injongo yokuthenga. Ukurhuma okuhlawulelweyo, ukusayinwa kwesilingo sasimahla kunye nezicelo zedemo zinokubalwa njengokuguqulwa okukhulu.
Ukuqinisekisa ukuba olo tshintsho lwenza ingeniso lubonakala ngokuchanekileyo Ukuguqulwa ikholamu, jonga nganye nganye ukuze uqiniseke ukuba isetelwe ukulungiswa: Khetha uguqulo ofuna ukuluhlela, emva koko ucofe uHlela useto> Ukulungiselela kwaye uqiniseke ukuba imiselwe on.
Ngokukwanjalo, kuya kufuneka ucime useto lokucwangcisela nayiphi na micro uguquko-njengokubhalisela i-imeyile yeendaba okanye ukukulandela kwimidiya yoluntu. Ezi nguqu zisazakuxelwa, kunye nazo zonke iinguqulelo ezinkulu, kwi Zonke iinguqulelo ikholomu.
Ukuba ugcine Iifayile Ukubhekisa okanye ukusebenzisa uguqulo ukwenza ukubala, jonga ukuqinisekisa ukuba zisasebenza ngokufanelekileyo. Umzekelo: Ukuba usete ezinye iinguqulelo ezincinci ukuya off, kusenokufuneka utshintshe amacebo okucoca ulwelo ukuze usebenzise ikholamu entsha “yokuguqula” ukuze kungabikho kuphazamiseka ekunikeni ingxelo.
Hlaziya imigaqo ezenzekelayo.
Ukuba usebenzisa imithetho ezenzekelayo or iikholamu zesiko ukulandelela ukuguqulwa, ukuphonononga kunye nokuhlaziya useto lwakho ukuqinisekisa ukuba ziyaqhubeka nokusebenza njengoko kulindelwe. Kwakhona, uya kufuna ukusebenzisa entsha Ukuguqulwa ikholamu yokuqinisekisa ukuba le mithetho iyaqhubeka ukukuxelela xa intengiso inefuthe kumgca ongezantsi weshishini lakho. Ukuba usebenzisa zeempendulo ukwenza imisebenzi yesiqhelo, uya kufuna ukukhangela ikhowudi kwaye uqinisekise nantoni na ekubhekiswa kuyo njenge ukuguqulwa ihlaziywa ukubonisa utshintsho.
Ukushwankathela: Utshintsho lukaGoogle lwamva nje kwi-AdWords yokunika ingxelo luyakwenza ukuba kube lula ukulandela idatha ebaluleke kakhulu kwishishini lakho. Konke okufuneka ukwenze kukuthatha amanyathelo ambalwa ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba iikholamu zakho, amacebo okucoca kunye nemithetho yenzelwe ukubonisa ngokufanelekileyo utshintsho.
tags: adwords imigaqo ezenzekelayoUguquko lwegamaamacebo okucoca adwordsgoogle adwords
UAmanda West-Bookwalter yiNgcali yeNtengiso yeDijithali yeMithombo yeendaba eFormstack, enoxanduva lokumilisela nokwandisa izicwangciso zentengiso yedijithali yenkampani yetekhnoloji. Phambi kokujoyina iqela leFormstack, uAmanda wakhonza kwindima ephezulu yolawulo lweakhawunti kwinkampani yolawulo lokucofa ngokuhlawula kwaye wathetha kwiinkomfa ezininzi zentengiso kwi-Intanethi, kubandakanya iHeroConf, iSMX East, kunye ne-SES Denver.
Iindlela ezi-7 zokuQinisekiswa kweWebhusayithi yeZiko loMthengi
Nov 5, 2015 kwi-6: 45 AM
Enkosi ngohlaziyo lukaAmanda. Kuninzi okunokukufumanisa kuluncedo. Enye indlela yokugcina kunye notshintsho kwiGoogle Adwords nakwamanye amaqonga ohlalutyo lwewebhu kukufumana isixhobo se-adtech esinokubadibanisa kunye http://www.TapAnalytics.com ungayenza loo nto.